စနေရဲ့ ရင်: 2010
အိပ်မက် - ၁၁ (Dream 11 by Naguib Mahfouz)
နိုင်းမြစ် ကမ်းခြေ စွန်ပလွံပင်တွေရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အရပ်မြင့်မြင့် ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က ရင်ကို ဖွင့်လို့ လဲလျောင်းနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလှတဲ့ ကလေးတွေက သူမဆီကို တွားသွားနေကြတယ်။ နောက် ကလေးတွေက သူမရဲ့ ရင်တ၀ိုက်မှာ ၀ိုင်းအုံနေကြပြီး အငမ်းမရ လောဘကြီးမှုမျိုးနဲ့ သူမရဲ့ ရင်အစုံကနေ နို့ရည်တွေကို စုပ်ယူ နေကြတယ်။ အဖွဲ့တဖွဲ့ က ကျေနပ်လောက်အောင် နို့ရည်တွေ သောက်ယူလို့ ပြီးသွားပြီဆိုလိုက်တိုင်း နောက်အဖွဲ့တဖွဲ့က အနားကပ်လာနေကြတယ်။
အဖြစ်အပျက်တခုလုံးက ထိန်းချုပ်မရတော့တဲ့ အနေအထားတခုထိအောက်ဖြစ်နေပြီး အမိန့်အာဏာ စနစ်အားလုံးကလည်း အသုံးမ၀င်တော့သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ တစုံတယောက်က လူတွေကို ဂရုစိုက်မိအောင် လုပ်သင့်ပြီး အကူအညီတောင်းသင့်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတွေအားလုံး နိုင်းမြစ်ကမ်းခြေတလျှောက်မှာ အိပ်ပျော်နေကြဆဲ။ ကျွန်တော် အော်ဟစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပါးစပ်ထဲက ဘာအသံမှ ထွက်မလာဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ကတော့ ၀မ်းနည်းမှုတွေနဲ့ တင်းကျပ်ပြည့်သိပ်နေလေရဲ့။
အမျိုးသမီးရဲ့ ကလေးတွေအတွက်တော့ သူတို့ဟာ အဲဒီအမျိုးသမီးအတွက် အရိုးပေါ်အရေဖုံးရုံ အနေအထားထက် ဘာကိုမှ ချန်မထားပစ်ခဲ့ကြဘူးလေ။ သူမဆီက နို့ရည်ကို ထပ်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ သိတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ သွားတွေနဲ့ သူမကို အရိုးသက်သက်ကျန်သည်အထိ အသားတွေကို ကိုက်ဖျက်ပစ်ကြတယ်။ အော်ဟစ်ပစ်လိုက်ဖို့ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ မှတ်ယူပေမယ့် ဘာအသံမှတော့ ထွက်မလာခဲ့ဘူး။ ကလေးတွေက နို့နဲ့ အသားတွေ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရတာကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ စစ်ပွဲတခု ဖြစ်လာတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာတွေကို ဖျက်ဆီးခံနေရသလိုပဲ သူတို့ရဲ့ သွေးတွေကလည်း စီးဆင်းနေလို့ပေါ့။
သူတို့ထဲက တချို့ ကျွန်တော့်ကို မြင်သွားကြတယ် နောက် ကျွန်တော့်ဆီကို လှမ်းလာနေကြတယ်။ တွေးစလို့ မရလောက်အောင်ကို ဆိုးရွားလှတဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို ပေးဖို့ ကျွန်တော့်ဆီကို လှမ်းလာနေကြတယ်လေ.........
(၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၉)
(အီဂျစ် စာရေးဆရာ နာဂွတ်မားဖုဇ်၏ အိပ်မက်များပေါင်းချုပ်မှ အိပ်မက် ၁၁ ကို ပြန်လည်ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရေးသူ၏ တင်ပြလိုသည့် တန်ဖိုးများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါက ကျွန်တော်၏ ညံ့ဖျင်းမှု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်)
Posted by Ne Ou at 12:29 PM
ကမ်းပါးမှာမှ ပေါက်ချင်တဲ့ သစ်ပင်
ကမ်းပါးမှာပဲ ပေါက်ချင်ခဲ့တဲ့ သစ်ပင်မို့
ကျွန်တော်ကတော့ လမ်းဖြောင့်ဖြောင့်ပဲ လျှောက်တယ်........
(၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀၊ ညနေ ၅း၂၃)
Posted by Ne Ou at 5:38 PM
အိပ်မက် - ၁၃၉ (Dream 139 by Naguib Mahfouz)
အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပြပွဲတခု....
နာမည်ကြီးရခြင်း အကြောင်းအရင်းက များများစားစားမဟုတ်ဘဲ တချပ်တည်းသော ပန်းချီကားကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုပန်းချီကား၏ ထူးခြားချက်က ကြည့်သူက ချဉ်းကပ်လာတာနဲ့ အမျှ ပုံက ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာက ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ တောအုပ်တခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရှေ့ကို တလှမ်းတိုးလိုက်တာနှင့် မြင်ကွင်းက ပြောင်းသွားသည်။ တောအုပ်က ပျောက်သွားပြီ ထိုနေရာမှာ သိသိသာသာကိုပဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းမတယောက် ရဲ့ ၀တ်လစ်စလစ်ပုံက ရောက်လာသည်။
နောက်တလှမ်းရှေ့ဆက်တိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ထိုအမျိုးသမီးသည် မရှိတော့။ အမျိုးသမီးအစား မြင်လိုက်ရသည်က ကျောက်တုံးက စလို့ ခုခေတ်နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေထိအောင် လက်နက်ပေါင်းစုံကို ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ ဒေါသမောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ စစ်ပွဲ တခုဖြစ်နေပြီ.......
(၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၇)
(အီဂျစ် စာရေးဆရာ နာဂွတ်မားဖုဇ်ရဲ့ အိပ်မက်များပေါင်းချုပ်ထဲမှာ အိပ်မက် ၁၃၉ ကို ပြန်လည်ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရေးသူ၏ တင်ပြလိုသည့် တန်ဖိုးများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါက ကျွန်တော်၏ ညံ့ဖျင်းမှု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်)
Posted by Ne Ou at 5:46 PM
အလင်းတွေ တောက်ပြရာ နေရာတလျှောက်
ကျွန်တော်တို့လည်း ရောင်တော်ပြန်တွေ ပေါက်ခဲ့ကြပေါ့
ဒါ နေရဲ့ အလင်းလား
ကျွန်တော် အတော်တော့ စီးပွားဖြစ်ခဲ့သား.......
ကျွန်တော်ကတော့ အသားတန်း အသွေးတန်းကိုပဲ ရွေးတယ်.........
အခုခေတ်ဟာ ပေါက်တတ်ကရ ပြောတတ်မှ
Branded ဖြစ်တဲ့ အင်္ကျီကိုဝတ်
အထဲက ဒီအကောင်က စိတ်တွေ ဘယ်လောက်ပုပ်ပွနေလဲ
လူတွေထဲမှာ ရွှိုင်းတယ်ဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ....
ဝေးသထက် ဝေးလာခဲ့တဲ့ ရင်နဲ့
အဇ္ဈတစိတ်သဏ္ဍာန်အမှန်ကို ကျရှုံးမှုတွေ မြန်မြန်လာတယ်.........
(၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ညနေ ၆နာရီ)
Posted by Ne Ou at 6:00 PM
ငါက သူတို့အပါးက ၀စ်လစ်စလစ် နေနေပြရတယ်
ငါ့တကိုယ်လုံးကို ပုတ်ခတ်ညှင်းဆဲတဲ့ဒဏ် ခံရတယ်
ငါ့လို အဟောင်းကို စွန့်ပစ်တတ်ကြတယ်
အ၀တ်တထည်ဘ၀နဲ့ သူတို့ လှပဖို့ ကူခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်
အခုတော့ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ
လက်နှီးစုတ် ခြေသုတ်ခုံ ဘ၀နဲ့
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ နေ့လည် ၁း၂၆)
Posted by Ne Ou at 1:29 PM
အိပ်မက် ၂၁ (Dream 21 by Naguib Mahfouz)
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ် ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာပဲ ကောင်လေးတွေက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ မကြာခင်ပဲ ရဲတွေရောက်လာတယ်။ သေချာ ဂရုပြုမိတော့ ကျွန်တော်က တခြားလူတစုနဲ့ အတူ ရဲအရာရှိရဲ့ စားပွဲရှေ့မှာ ရောက်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို စစ်မေးခံနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာလုပ်ခဲ့သလဲလို့ မေးတော့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ တညီတညွတ်တည်း အဖြေပေးခဲ့ကြတယ်။ အစီရင်ခံစာပေါ်မှာ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ရေးတော့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ရှက်လွန်းလို့ လက်တွေက တုန်ယင်နေခဲ့တယ်လေ.......
Posted by Ne Ou at 10:47 PM
အိပ်မက် ၁၅ (Dream 15 by Naguib Mahfouz)
ခန်းမကျယ်ကြီးရဲ့ လျှောက်လမ်းတဖက်တချက်မှာ ရုံးခန်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားတယ်။ အစိုးရရုံးခန်းတခုပဲ ပြောမလား ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတခုပဲလား ၀န်ထမ်းတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ စားပွဲမှာကို ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေတဲ့သူက ထိုင်လို့ တချို့ကလည်း ရုံးထဲမှာပဲ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြလို့ပဲ။
ရုံးထဲမှာက ယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းကော မိန်းကလေးဝန်ထမ်းတွေကော ရှိနေကြပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ကလူကြလို့ မျက်စပစ်ကြလို့။ ကျွန်တော်ကကော ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ကလည်း ဒီရုံးက ၀န်ထမ်းတယောက်ပဲ ထင်တယ် လစာကလည်း ခပ်နည်းနည်းပဲ ရတဲ့ ၀န်ထမ်းတယောက်ပေါ့။ စိတ်ထဲမှာလည်း လခနည်းတာကိုပဲ ခံပြင်းခံခက်ဖြစ်နေရတာလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် ကိုယ့်ထက် ရာထူးအဆင့်မြင့်တဲ့ ခပ်ချောချော အမျိုးသမီးတယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမိတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် သူက ဒီရုံးမှာ လုပ်နေတာ ကျွန်တော့်ထက်တော့ အတော်ကြာပြီထင်တယ်။ သူမက ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး တခါတည်း ကျွန်တော့်ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။
"ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀တခု တည်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရာကို ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်မှာ မပြည့်စုံသေးဘူးလေ" သူမက ရှင်းပြသွားခဲ့တယ်။
ဒီစကားက ကျွန်တော့်အတွင်းစိတ်ထဲထိ ဒဏ်ရာတခုအဖြစ် စူးနစ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ တခြားအမျိုးသမီးအချို့ရှိပေမယ့် ဘယ်အမျိုးသမီးကိုမှ ဒီစကားမျိုး မပြောဖြစ် မဆွေးနွေးဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အထီးကျန်သလို အမြဲတမ်းလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက် ခံစားနေခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ ကောင်မလေးအသစ်တယောက် အလုပ်ဝင်လာတယ်။ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော့်အတွက် လက်အောက်ဝန်ထမ်းတယောက်ရတာပဲ။ ကျွန်တော်က အယ်ဒီတာ သူမက စာစီစာရိုက်သမား ကျွန်တော့်လခက သူမထက် နှစ်ဆလောက်ရတယ်။ သူမက ရုပ်သိပ်မချောဘူး နောက် လူတွေကလည်း သူမရဲ့ အကျင့်ပျက်မှုတွေအကြောင်း အတင်းပြောကြတာကို ကြားကြားနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်ရဲ့ အထီးကျန်မှုကို ဖြိုဖျက်ပစ်ဖို့ သူမကို ချဉ်းကပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူမကလည်း အလိုက်သင့်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားတယ် နောက် ကျွန်တော့်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေပျောက်ဆုံးပြီး သူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်မိတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ့်နားကိုယ်တောင် မယုံနိုင်ဘူး နောက် သူမက ဆက်ပြောတယ် "ကျွန်မရတဲ့လခနဲ့ ကျွန်မ အဆင်ပြေပါတယ် အထူးသဖြင့် ရှင့်ရဲ့ လခပါပေါင်းလိုက်ရင် ဘာမှပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပိုက်ဆံကို ဂရုမစိုက်ဘူး"
ဒါဆိုရင် သူမ ဘာကို ဂရုစိုက်တာလဲ ကျွန်တော်မေးဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ သူမက အဝေးတနေရာကို ထွက်သွားလေရဲ့............
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၄)
(အီဂျစ် စာရေးဆရာ နာဂွတ်မားဖုဇ်ရဲ့ အိပ်မက်များပေါင်းချုပ်ထဲမှာ အိပ်မက် ၁၅ ကို ပြန်လည်ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရေးသူ၏ တင်ပြလိုသည့် တန်ဖိုးများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါက ကျွန်တော်၏ ညံ့ဖျင်းမှု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်)
Posted by Ne Ou at 11:39 AM
အိပ်မက် - ၃ (Dream3by Naguib Mahfouz)
လှေရဲ့ အလယ်က ရွက်တိုင်မှာ လူတယောက်ကို တကိုယ်လုံး ကြိုးနဲ့ တင်းတင်းတုတ်ချည်ခံထားရတယ်။
သူက သူ့ရဲ့ခေါင်းကို ပရမ်းပတာကို ဘယ်ညာယိမ်းခါနေရင်း ပါးစပ်ကလည်း နာကျင်သံနဲ့ အော်ဟစ်နေတယ် "ဘယ်တော့မှ အခုလို နှိပ်စက်မှုတွေက ရပ်တန့်မှာလဲ"
ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ကတော့ သူ့ကို သနားတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်း တယောက်နဲ့တယောက် အကြည့်ချင်းဖလှယ်မိတယ်။
အဲသည့်အချိန်မှာပဲ အသံတခုကထွက်လာပြီး မေးလိုက်တယ် "မင်းကို ဒီလို ဘယ်သူလုပ်ထားတာလဲ"
နာကျင်နေတဲ့သူက သူ့ရဲ့ခေါင်းကို ဘယ်ညာယမ်းနေရင်းပဲ ပြန်ဖြေတယ် "ဒါ ကျွန်တော့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ထားတာ"
"ဒါ ကျွန်တော့်အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုမို့ပဲ"
"ဒါဆို မင်းက ဘာအပြစ်ကျူးလွန်မိလို့လဲ"
"လျစ်လျူရှုမှုကြောင့်" သူက ဒေါသစိတ်နဲ့ အော်ဟစ်တယ်
"မင်းက အိပ်မက်မက်ခဲ့သလို အဲသည့် အိပ်မက်ကိုလည်း ခံစားခဲ့သူမှန်း ငါတို့သိကြပါတယ်" ကျွန်တော်
၀င်ပြောလိုက်တယ်။ "ဒါပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ အတွင်းစိတ်တခုမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဒေါသတွေရှိနေမှန်း ငါတို့မသိခဲ့ဘူး"
သူ့ရဲ့ အသံက ကျယ်သထက် ကျယ်လောင်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပြန်အော်လိုက်တယ်
"မင်းကိုယ်တိုင်လည်း အချက်တခုကို လျစ်လျူရှုခဲ့တာပဲ။
အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးနေသည့်တိုင် သူတို့ရဲ့ မြင့်မြတ် ကြီးကျယ်မှုကိုတော့ ခ၀ါချမထားခဲ့နိုင်ဘူးဆိုတာပဲ"
၀မ်းနည်းမှုနဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုက အဲသည့်စကားနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃)
(အီဂျစ် စာရေးဆရာ နာဂွတ်မားဖုဇ်ရဲ့ အိပ်မက်များပေါင်းချုပ်ထဲမှာ အိပ်မက် ၃ ကို ပြန်လည်ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းစာရေးသူ၏ တင်ပြလိုသည့် တန်ဖိုးများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါက ကျွန်တော်၏ ညံ့ဖျင်းမှု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်)
Posted by Ne Ou at 12:39 PM
ကျွန်တော့်ဘ၀ကို အရိုင်းလို့ ထင်သူကိုမှ
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ည ၉း၄၇)
Posted by Ne Ou at 12:35 PM
နာမည်မှားရေးခံရတဲ့ ချက်(cheque) တစောင်လိုပဲ
ဒီချက်တစောင်က ဖြဲဆုတ်ဖို့သက်သက်သာ ဖြစ်လာခဲ့........
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ မနက် ၉း၀၈)
Posted by Ne Ou at 12:31 PM
ဟောဟို ကြယ်က တောက်ပနေတုံးပဲ
ငါ့ အတင်းတွေ ဘယ်လိုချချ
မလွမ်းလို့ ထားခဲ့တဲ့ သီချင်း
မကျွမ်းလို့ သွားခဲ့တဲ့ တမ်းချင်းတွေအတွက်
မဆန်းလည်း တမ်းတတတ်တဲ့ငါ့ကို လမ်းဆုံးရင် မြေဖို့ပေးပါ…….
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၉၊ ညနေ ၅း၁၈)
Posted by Ne Ou at 5:24 PM
"သက်သာ" ဆိုတဲ့ အနေအထားတခုမှာ
ငါ ညည အိပ်ရေးပျက်ရပါ့ပကော....
ငါ ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာရပြန်ပါ့ပကော.......
ခဏတာဆိုတာ စက္ကန့်လား မိနစ်လား နာရီလား ရက်တွေ နှစ်တွေလား
အဲဒါ ငါတို့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ မူတည်လိမ့်မယ်.....
အသက်နဲ့ ခန္ဓာပဲ ကျန်တော့တယ်
ငါ့ ပါးစပ်လည်း ဒီရေကြောင့် ခါးလှပြီ.........
သစ္စာ ခါးခါးက ဒီနားမှာထား
ဟိုး Trash Bin ထဲ ပစ်တင်လိုက်တယ်
မင်းတို့ ကောက်ယူလိုက သွားကောက်
ငါ့ အနာဂတ်က ဖိတ်ဖိတ်တောက် မနေလည်း
ငါ့အပြုံးက အရိပ်မည်းတွေအောက်မှာ လက်တယ်
ဒီဒေသဟာ ငါတို့ "သက်သာ" အနေအထားကြောင့် နေ့တွေညတွေလည်း ပါးတယ်
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၆၊ နေ့လည် ၁၁း၅၂)
Posted by Ne Ou at 11:53 AM
မင်းက ခုမှ ဘာစိုးရိမ်နေရတာတုန်း....
မင်းကိုငါ ဘယ်လောက်ချစ်တယ် မချစ်တယ်
လက်ထပ်တုန်းက တိုက်တလုံး ကားတစီးတင်တောင်းခဲ့တာလေ
လုပ်ငန်းရှယ်ယာတွေက ထားပါ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး......
သူ့ခေတ်သူ့အခါ အခမ်းနားဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာမလား....
ငါလည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး ငါ ဘယ်မှာငြင်းဘူးတုန်း
မင်း အိတ်ကို LV မှ ကိုင်ချင်တာဆိုလို့
ငါ ဘယ်နှခါ တွန့်တိုဘူးလို့တုန်း........
ကြည့်စမ်း ဟောဒီမှာ မင်းနဲ့ငါနေဖို့
....ကိုကိုရေ ကိုကို ဖုန်းလာနေတယ် ကိုကိုရေ......
အေးအေး အင်း ညတွေ့နေကြအိမ်မှာပဲလေနော် အေးအေး
ဒီမှာ ဦးရဲ့ မိန်းမကွယ် သူ့ကို မချစ်ပါဘူးပြောနေလို့ ပြန်ရှင်းပြနေတာ
မင်းကို ငါ ဘယ်လောက်ချစ်
ဘယ်လောက် သံယောဇဉ်ကြီးတာ မင်းသိပါတယ်.....
(၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၊ နေ့လည် ၁း၀၇)
Posted by Ne Ou at 11:01 AM
ငါ အကြိမ်ကြိမ် အတွေးတွေ ပြုတ်ကျခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့.........
K နဲ့ P က ဘယ်လောက်များတန်ဖိုးပါသလဲ
သူတို့ကို လူတိုင်း လျစ်လျူရှုပေးခဲ့ကြတာချည်းပဲ မလား........
သူတို့ ရှေ့ဆုံးက ရဲရဲတည်ရပ်
ဖ၀ါးထက်မျှတောင် မခွာအောင် နေပေးခဲ့တဲ့
ငါ သူတို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ဦးညွှတ်ခဲ့ရတယ်......
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ နေ့လည် ၁၁း၄၆)
(ကျွန်တော့်ဖေဖေဆီက ရခဲ့တဲ့ အတွေးလေး တခုကို ပြန်လည်ဝေမျှကြည့်တာပါ)
Posted by Ne Ou at 9:45 AM
ကဲ နောက်ဆုံးတခုပဲ လိုတော့တယ်
ဟောဒီအိမ်လေ ဆောက်လိုက် ပြိုလိုက် မဖြစ်ဖို့အရေး
ဘိလပ်မြေရဲ့ အရေးပါပုံမျိုးနဲ့ ပေးဆပ်မှု
တခုခုတော့ ဆုံရှုံးတာလည်း ရှိမပေါ့
လေနဲ့အတူ ဝေးကြမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်...........
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘ ၂၀၊ နေ့လည် ၁၁း၁၉)
(Credit to Ko Naing Htun Lwin, I got the idea for this poem while talking with Ko Naing Htun Lwin)
Posted by Ne Ou at 9:44 AM
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ နေ့လည် ၁၁း၅၈)
Posted by Ne Ou at 9:43 AM
ကျုပ်ကို အဆင့်မြင့်မြင့် စာရင်းသွင်းခဲ့ကြလဲ.....
ကျုပ်ကို အဆင့်မြင့်မြင့် ဆက်ဆံခဲ့ကြလဲ.....
ကျုပ် ရေ ကိုသောက်
ကျုပ်ကိုကျုပ် 'မူး' ဖြစ်ရတာကိုတောင်
နောက် ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်ကပဲ
" မြစ်မမြင်ဘူး မူး မြစ်ထင်"တဲ့
ကျုပ်ကိုကျုပ် နဂိုကတည်းက ချောင်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့ရင် အကောင်းသား.......
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၇၊ မနက် ၉း၂၉)
Posted by Ne Ou at 9:40 AM
လှိုင်းတွေက ခတ်လို့ သင်နေဆဲ……….
အလွမ်းဆိုတာကို ခပ်စိမ်းစိမ်းပဲ ထိတယ်……
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၈၊ ည ၁၀း၄၅)
Posted by Ne Ou at 11:27 PM
ငါ ကြင်နာပြတာတွေများ မမှားခဲ့ပါဘူး နဒီ……
ငါ့ချစ်ခြင်းကတော့ နင့်အတွက်ပဲ နဒီ….
ငါတို့ အသက်တွေ တင်
ငါတို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ် နဒီ…….
နင် လှမ်းရာ လမ်းတလျှောက်
ငါတို့ မခမ်းခြောက်ခဲ့ဘူး နဒီ…….
နင့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုနဲ့ အသက်ဆက်ပေးခဲ့ပါ နဒီ…..
ငါ့ ရင်ဘတ်ထဲကမှ မဟုတ်ခဲ့တာ နဒီရယ်
နင့်ကိုငါ ပိုင်တယ်လို့ မဆိုလိုရက်ပါဘူး
နင့် မြစ်ဖျားခံရာက လာတဲ့ မီးမှန်သမျှ
ငါ့ရင်ကို ဖြတ်ခဲ့တာပါ နဒီ……………..
ငါ့ရင်က နင့်ကို နှင်မချဘူး
ငါ့ရင်က နင့်ကို ဘ၀င်မကျစိတ်မပြခဲ့ဘူး
ငါ့ရင်က နင့်ကို အသွင်အပြင်မှန်သမျှ လက်ခံပြခဲ့တာပါ နဒီ………
လှမ်းပါ နင်းပါ စီးဆင်းပါ
ဟောဒီခန္ဓာအထက် နင်ပျော်နေသမျှ ငါ လက်ခံထားခဲ့မှာပါ နဒီ…..
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၅၊ နေ့လည် ၂ နာရီ)
(ကိုင်ဇာရဲ့ ကစ္ဆပနဒီ လှိုင်းသံကို နားထောင်မိရင်း ကစ္ဆပနဒီခေါ် ကုလားတန်မြစ်ရဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်မိရာမှ ရေးသားမိခြင်းဖြစ်သည်။ ကစ္ဆပနဒီမြစ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ဒေသတွင် မြစ်ဖျားခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မိသလောက် ရေးကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်မရောက်ဘူးပါ အမှားပါကောင်း ပါနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် အမှားအယွင်းရှိခဲ့လျှင် ထောက်ပြဆွေးနွေးပေးစေလိုပါသည်)
Posted by Ne Ou at 4:25 PM
သည်းခြေပျက်တဲ့ အချစ်ရူးတွေ အကြောင်း
ငါတို့ နှလုံးသားကို ရှာကြတာလေ…….
အဲသည့် အသုံးမကျတဲ့ အချစ်အတွက်
ဒီဘ၀မှာ ၁ နဲ့ စလို့တောင်ရပါ့မလား
၁ နဲ့ ၂ ကိုကျော်ချပြီး ၃ကပဲ စလို့ရေရအောင်
သူ့ဘ၀က ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် ရှိတယ်လေ……..
အ ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဆုံးတဲ့နေ့
ငါ အအ တယောက်လို စကားမဆို
(၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၊ မနက် ၁၁း၂၃)
(Dedicated to Ne Lynn)
Posted by Ne Ou at 12:26 PM
Til Death by Travis Catlett
ငါ ဟောဒီနံရံကို ဖောက်မြင်တတ်ရမှာတဲ့လား
ဟောဒီ အသွေးအသက်က တောင်းဆိုမှု
မင်းကိုပဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချစ်တခု
ဒါ ဘိုဆန်ဆန်အစာ တပုဒ်မဟုတ်ခဲ့တာ
မင်းနဲ့ငါ ဟောဒီလမ်းကို ဆက်လျှောက်ဖို့
သူ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခဲ့တယ်လေ
ငါတို့နဲ့အတူ ယူသွားကြဖို့ လိပ်ပြာလိုက်ဖမ်းရအောင်
ဟောဒီ နှလုံးသားကို သတ်ခဲ့တယ်
ဒါ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သေခြင်းတော့ မဟုတ်ဘူး
သူ အငတ်နဲ့သေတာ မဟုတ်ဘူး
သူ အရှက်နဲ့သေတာ မဟုတ်ဘူး
သူ့ အသည်းတစက်ကို ငါတို့ နှုတ်ဆက်ကြရအောင်လေ..........
(၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ည ၁၀း၀၉)
(Sweeney Todd ဇာတ်ကားမှ Johanna သီချင်းကို နားဆင်ရင်း ပြန်လည်ခံစားရေးဖွဲ့သည်)
Posted by Ne Ou at 10:33 PM
လည်နေတဲ့ တအီအီ ဘီးသံကြားမှာ
အဲဒီ မောင်းသူမပါတဲ့ သုံ့ပန်းယဉ်ပေါ်
အချစ်စိတ်နဲ့ စကားစမြည်ပြောတဲ့ ညနေခင်းမှာ
ဆန္ဒဆိုတာ မင်းကိုများ ကိုယ်စားပြုမိလေသလား
မသင့်တော်ရာကို ထိန်းသိမ်းတတ်တာကိုမှ လူ့တန်ဖိုးလို့ဆိုကြောင်း
အသက်တွေလည်း ခဏခဏ အရှုရပ်
အပျက်တွေလည်း ခဏခဏ ရင်မှာခပ်လို့
ငါ့အသက်နဲ့ငါ အိုးစားကွဲမယ့် အရေးကို
ငါ့ဆီကို လာတွေဖို့ အကြောင်း
(၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ မနက် ၁၂း၄၀)
Posted by Ne Ou at 12:41 AM
မီးရှို့ခံရတဲ့ သုညကို ဒိုင်ယာရီထက်မှာ အက္ခရာတင်ထားတယ်.......
သုည သူ့နေရာမှာ သူပျော်နေတုန်းက
အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့လည်း အချိန်နာရီတွေကို မက်တယ်........
သုညကို သုညထက် မပိုခိုင်းပါနဲ့
သုည အလှအပကို မုန်းပါတယ်
သစ္စာတရားကို တန်ဖိုးတခုထက် သုညနေရာမှပဲ ပိုကျေနပ်တယ်....
ရှေ့မှာနေရမှထက် သုညဆိုတဲ့ သဘာဝ
သုည ပြာဖြစ်သွားလည်း သုညဆက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်...........
PS: သုညကို ညွှန်းဆိုစရာ သုညဖြစ်နေလို့ ဘာပုံမှ မတင်ထားပါ....
(၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊ ညနေ ၅း၄၀)
ဝေး ဝေး ဝေး
ငါ့မှာ လွမ်းစရာတောင် မရှိတော့ဘူးတဲ့
ဟောဒီရိုးသားခြင်းက ငါ့အစား ကမ္ဘာပေါ်ခြေချမယ်
အသက်ဟာ အပျက်တွေ မပါပေမယ့်
ငါ့စွန်အတွက် ငါ မြှင့်တင် လွှင့်ထုတ်
ဟောဒီ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ ကုန်လွှတ်တဲ့ အထိပေါ့
(သြဂုတ် ၂၅ ၂၀၁၀)
Posted by Ne Ou at 12:49 AM
ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ဝံ့သူမို့
ဧရာဝတီကို ငါ ဦးကျို့တယ်
ဟောဒီလျှောက်လမ်းထက်က ဧရာဝတီကို ငါမြတ်နိုးတယ်.....
မင်းရင်ထဲမှာ ငါတို့ ခိုခဲ့ကြတယ်
မင်းရင်ထဲမှာ ငါတို့ လူးလာဆန်ခတ်ခဲ့ကြတယ်
မင်းရဲ့သွေးသားတွေနဲ့ ငါတို့ အသက်ဆက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်
မင်းရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကို ငါတို့ ဖမ်းယူ စားသောက်ခဲ့ကြတယ်
မင်းရဲ့ သွေးကြောထဲကို ငါတို့ ညစ်ကြေးစေခဲ့ကြတယ်........
မာန်ဝင့်ပုံကို ငါ လေးစားတယ်
ဧရာဝတီ နင် ဦးမခခဲ့ဘူး
ဧရာဝတီ နင် ရူးသွပ်မပြခဲ့ဘူး
ဧရာဝတီ နင် ကျူးယုတ်မပြခဲ့ဘူး
ဧရာဝတီ နင် မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ဘူး.......
ဒါပေမယ့် နင့်သွေးတွေ ကြည်တဲ့အခါ..
နင့်အတွေးဟာ မသတီစရာ မရှိခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့် နင့်အတွေးတွေ သီတဲ့အခါ..
နင့် ဂီတဟာ စည်းနဲ့ဝါး မပါခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့် နင့်ဂီတဟာ ရင်ကိုခတ်တဲ့အခါ......
နီပြာရောင် နဲ့ ဒီကြယ်ပွင့်ကို နင်နဲ့တူတူ ရဲရဲလွှင့်ထူကြရအောင်ပါ
(သြဂုတ် ၁၈ ၂၀၁၀၊ ညနေ ၆း၀၆)
Posted by Ne Ou at 6:48 PM
ငါ နှင့် ငါ နှင့် ငါ
ငါ အလှကို ဗန်းမပြခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့် ဘ၀က လန်းမလှတာကိုတော့
မြန်းမကြွတဲ့ ကံကြမ္မာကို ယိုးမယ်ဖွဲ့တယ်.........
ငါမဆိုတတ်ဘဲနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့
ငါ တတ်ခဲ့တာ ပထမဆုံးစကားလုံးက
ဖ၀ါးဗလာထက်က ငါလိုလူက မုန်းတယ်
ဒီလို ရုပ်လုံးကြွဇာတ်ထုတ်မှာ ငါမပါလည်း
ငါ့ သိက္ခာကတော့ မြဲတယ်........
ငါ့ကိုယ်ငါ ငါ စိစစ်တယ်.........
ငါ မျက်ရည်တွေ ၀ဲဝဲ.........
(သြဂုတ် ၁၀ရက် ၂၀၁၀၊ ညနေ ၆း၁၆)
Posted by Ne Ou at 11:25 PM
ချိုသာတဲ့ အပြုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူ
ရွှင်ကြည်ဖွယ် မျက်နှာပေးနဲ့ စွဲဆောင်တတ်တဲ့ သူ
ကျေနပ်စဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ သူ.........
ငါ ဘာမှန်းမသိတဲ့ သူ့ရင်ပေါ်က စာတွေရယ်...........
ဟယ်ရီလင်းရဲ့ သီချင်းသံနဲ့ ၀ံ့တယ်
" သူ ခေါ်တယ် လာပါ လာပါ "..............
(သြဂုတ် ၇ ၂၀၁၀၊ မနက် ၁၀း၅၈)
Posted by Ne Ou at 11:15 AM
ကြိယာပုဒ်ရဲ့ ဘေးက ဝေးဝေးရှောင်ဖို့ ကြိုးစားလည်း
ပြုသူ အပြုခံရသူ ကြိယာဆိုတဲ့ ဗမာစကား
ပြုသူက ကြိယာရဲ့ ဝေးနေနိုင်ပေမယ့်
နာမ်စားဘ၀အတွက် ကျွန်တော့်ကို နင်းချေရက်ခဲ့တယ်.........
(သြဂုတ် ၆ ၂၀၁၀၊ နေ့လည် ၁၁း၅၄)
Posted by Ne Ou at 12:01 PM
ကျိန်စာ စကား နား
မင်းနှုတ်ခမ်းက မလှုပ်တဲ့ ဒီစကား
ငါ ဘယ်တုန်းကများ ကြားမိပါလိမ့်မလဲ
အပါးမှာ အနားဟာ ဖွာနေပြီ
မင်းနှုတ်ခမ်းက မလှုပ်ခတ်တဲ့ ဒီစကား
ပုန်းတမ်းဖော်တမ်း ငါ့ရင်ပျက်ကတော့ ကြမ်းတယ်..........
( သြဂုတ်လ ၅ရက် ၂၀၁၀၊ ည ၁၁း၂၆)
Posted by Ne Ou at 11:29 PM
ငါ့လက်ရှိ meeting ထဲ
အိပ်စက်ခြင်းနဲ့အတူ အနာဂတ်အရေး ဆွေးနွေးနေတုန်း…..
အသံစာစာနဲ့ အော်ကျက်ခဲ့တဲ့ ညအခါ လသာသာကြားထဲ
ငါ့ခံစားချက်တွေကို တစိတ်တခြမ်းဖဲ့ပြီး အလွတ်မှတ်လို့ရမလား
အဲဒီ ဘလက်ကော်ဖီကို ငါက သကြားနည်းနည်းနဲ့ ကြိုက်နေတုန်း….
ထီးဆောင်းထားရုံနဲ့ ငါတို့တွေ အတွက် လုံလောက်ပါ့မလား
အဲဒီခပ်ဖျားဖျားလူနာက ကဗျာတွေနဲ့ ငါတို့ ခေါင်းအထက်က ရွာရွာကျတယ်…..
သူ အချစ်ဆိုတာကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့
ရေတွေ စိုစိုရွှဲလို့ မွန်းကျပ်နေတဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့
သူ ဒီတသက်စာ ဖျားနာနေတော့မယ်………..
ဟောဟိုကစောင်းတလက်က “နှင်းပျောက်တဲ့နွေ” ကို ကျူးရင့်ရင်း ငါ့ကို အရွဲ့တိုက်တယ်…….
နှင်းဆီက ဖြူသလား နီသလား ၀ါသလားထက်
သူ့ရဲ့ အမွှေးဓာတ်ကို ဖျားနာနာ ဥယျာဉ်မှုးထံ ပေးခဲ့တာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်
သူ့မျက်လုံးတွေ မပြိုခင်အထိ သူညည်းသွားတယ်
ချစ်တတ်ဖို့ အရမ်းကို ငယ်လွန်းပါသေးတယ်တဲ့……
ဒီကမ္ဘာမှာ ငါလေ့လာစရာတွေ ကျန်သေးတယ်………
(၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၁၀ စနေနေ့၊ နေ့လည် ၁၁နာရီ ၁၁မိနစ်)
သူတသက်လုံး ကျောပိုးထမ်းခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တွေကိုပစ်ချ
အဲဒီ အိပ်မက်မကို သူနာကြည်းမှုတွေနဲ့ ပါးချပစ်တယ်.......
ခံစားချက်တွေက ရင်ထဲမှာ အမြစ်တွယ်နေပြီ
ငါ့အတွေး ဘယ်လောက်များ လက်တွေ့အဖြစ်ထွင်းထုနိုင်ခဲ့သလဲ
သူ့အသည်းနဲ့ အိပ်မက်ဓားက တထပ်တည်းကျလို့.............
အဲဒီအိပ်မက်ကို ကျောကုန်းပေါ်က ပစ်ချလိုက်တယ်......
သူ့အရိုးတွေကပဲ သူ့အတွက်သူ လေးလှပြီ........
သူ ဖြည်းဖြည်းချင်း အသက်ရှုရင်း
လက်ကလေးက နွေးထွေးစွာ ဆုပ်ထားခဲ့တယ်.........
(၂၀၁၀ ဇွန် ၃၀ ည ၁၀နာရီ ၄၇ မိနစ်)
Posted by Ne Ou at 3:29 PM
ပျော်ရမည့် အကြံ တရက်သာခံ၍.....
Posted by Ne Ou at 10:29 AM
ကြာတော့ကြာပါပြီ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ဇာတ်ကားလေးပါ မင်းသားက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖေးဘရိတ် Johnny Depp နဲ့ Leonardo Dicaprio။ ဇာတ်လမ်းက တော်ရုံတန်ရုံ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဆုိုရင်တော့ မျက်ရည်ပေါက် ပေါက်ကျသွားစေအောင် ၀မ်းနည်းမိအောင် ရိုက်ထားတဲ့ Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစား။ ဂျွန်နီနဲ့ လီယိုနာဒို ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ တကယ့် အခရာပဲလုို့ ပြောနုိုင်တယ်။ အရမ်းငယ်သေးပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားနဲ့အတူ လီယိုနာဒိုက အော်စကာဆုပေးပွဲရဲ့ ဇာတ်ရံဆုအတွက် ပဏာမအရွေးခံခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ပဏာမရွေးခံရတဲ့ဇာတ်ကားလုို့ သိရပါတယ်။ တချို့ကဆို တကယ့် စိတ်မနှံတဲ့ကောင်လေးကိုများ ထည့်ရုိုက် ထားသလားလုို့ ထင်ခဲ့ရတယ်လုို့ ပြောရလောက်အောင် သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်က ဇာတ်လမ်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ နုိုင်လွန်းလှတယ် ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ၈/၁၀ လောက်ပေးချင်တယ်....
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ ။ Johnny Depp က ဒီဇာတ်ကားမှာ Gilbert Grape အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိသားစုမှာ သူက ငွေရှာပေးတဲ့ တခုတည်းသော ယောက်ျားလေးပါ။ သူ့ရဲ့ အဖေ ဆုံးသွားပြီးကတည်းက အမေက အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် လုံးဝမထွက်တော့ပဲ စားသောက်နေလုိုက်တာ တချိန်က အချောဆုံးဆုိုတဲ့သူ့အမေက အ၀လွန်ပြီး အိမ်ပေါ်တောင် မတက်နုိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ညီမတယောက်က ကျောင်းမှာ စားဖုိုမှုးလုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အဲဒီကျောင်းမီးလောင်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ အလုပ်မရှိတော့ပဲ အိမ်မှာပဲ အိမ်မှုရေးရာကို စီမံနေရသူပါ။ နောက်ထပ် ညီငယ်ကတော့ Leonardo ပါ။ သူကတော့ ကျပ်မပြည့်ရှာတဲ့ ကောင်လေးတယောက် သူ့ကို အကိုကြီးက သွားလေရာ နေရာခေါ်သွားရပါတယ်။ အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကတော့ အိမ်မှာပဲ နေပြီးကျောင်းတက်နေတဲ့သူပါ။ ဂျွန်နီက မြို့လေးရဲ့ တခုတည်းသော ကုန်စုံဆုိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမြို့လေးမှာပဲ စူပါမားကက်ကြီးတခုက လာဖွင့်တဲ့ အခါ သူတုို့ရဲ့ ဆုိုင်ကလေးက ယုိုင်နဲ့ နဲ့ အနေအထားရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဂျွန်နီက သွားလေရာနေရာတုိုင်းကို လီယိုကို ခေါ်သွားပေမယ့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြသနာက လီယိုဟာ အမြင့်ကိုတွေ့ရင် တက်ချင်တာပဲ လူလစ်လုိုက်တုိုင်း လီယိုက အနီးနားက ရေစင်ကြီးတွေပေါ်ကို တက်လွန်းလုို့ ရဲတွေနဲ့ဂျွန်နီ မကြာခဏ စကားများရပါတယ်။ ဂျွန်နီက သူ့ရဲ့ ဘ၀ကို မိသားစုအတွက် နှစ်မြုပ်ထားပြီး သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အကုန်လုံးကို စွန့်လွှတ်ထားခဲ့သူ၊ သူတုို့မြို့ကလေးကို အလည်တခေါက်အဖြစ်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ကြိုးနွှယ်မိပေမယ့် သူ့မိသားစုအတွက် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တနေ့မှာ လီယိုရေစင်ပေါ်တက်ပြီး အပြန်မှာ ရဲတွေက ဖမ်းသွားပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ အမေက အရမ်းကို သူ့သားအတွက် စိတ်ပူပြီး ရဲစခန်းကနေ သူ့သားကို ထုတ်ပေးဖုို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ လူတွေက အ၀လွန်ဖြစ်ပြီး ဝေလငါးကြီးတကောင်လုိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို အထူးအခြားအဖြစ်ဝုိုင်းကြည့်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါ အရမ်းရှက်သွားပြီး အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ကို လုံးဝမထွက်ရဲတော့ပဲ အရမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ သားငယ် လီယိုနဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတောင် မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တပြိုင်တည်း သူ့ကြောင့် ဂျွန်နီအပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်သွားရလည်းဆုိုတာကို သိသွားခဲ့ပါတယ်......
Posted by Ne Ou at 11:48 PM
Labels: Johnny Depp, Leonardo Dicaprio, ရုပ်ရှင်
ဖေဖေရဲ့ ၂၇နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မှတ်တမ်း
မုိုးတွေနဲ့ အုံ့မှိုင်း ၀ုန်းဒုိုင်းကြဲနေစေတဲ့ကြမ်းတမ်းမှု အောက်.........
အဲဒီနေ့က လူ့လောကနဲ့ မိတ်ဆက်တယ်......
Posted by Ne Ou at 10:17 PM
ပြိုကျပျက်လာတဲ့ သူတို့ခန္ဓာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို
အဲဒါ မိုးရွာတယ်လို့ ခေါ်တယ်တဲ့........
"မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်ဆိုတဲ့" သီချင်းလေးတွေတောင်
မေမေလာရင် နို့စို့မယ်လို့ ငါတို့ဆိုချိန်
ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ်လို့ ငါတို့ဆိုချိန်မှာ
ပြိုပျက်သွားတဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ အဲဒီ တိမ်တိုက်အတွက်
သူတို့ မိခင် ဖခင် ဘယ်လောက်တောင် ရင်နာနေမလဲဟင်......
ငါ့နိုင်ငံကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့ မိုးတိမ်ရယ်...........
Posted by Ne Ou at 11:13 AM
အိမ်အမိုးကို သူတို့ ဖြုတ်မထားကြဘူးလေ
မိုးဆိုတာ တနေ့မှာတော့ ရောက်လာအုံးမှာကို။
နှစ်တလီ နှစ်လို့ စာအံခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ
အီတလီ အီလို့ ထည့်သင်မပေးခဲ့တာ(Italy)
မမေးခဲ့မိတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ အပြစ်လား။
သူ့ရဲ့ အလှအပတွေ အတွက်
ပလုံဆီနေတဲ့ အယ်ကိုဟောတွေ သက်သက်ရယ်။
ပြောစမှတ်ဖြစ်စရာ ဒဏ္ဍာရီအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်..........
Posted by Ne Ou at 10:36 AM
ကျွန်တော်က ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်း ဒါပေမယ့် ပန်းအလှကို...